Tonga nanatanteraka izany moa ireo namana mpanao gazety, ary teo ihany koa ny avy ao amin’ny MLE, sy ireo avy ao amin’ny Ministera izay notarihin’i Minisitry ny serasera Harry Laurent RAHAJASON, teo ihany koa ny Minisitry ny fampianarana amin’ny ambaratonga fototra Paul RABARY.
Mangataka amin’ny Ministeran’ny fahasalamana araka izany moa ny avy amin’ireto fianakavian’i Andry RATOVO ireto ny mba hanaovana dialyse amin’ny hopitalim-panjakana.
Ny dialyse iray dia efa 500 000 ariary (2 500 000 fmg), nefa mila atao indroa isan-kerin'andro anadiovana ny rany.
Marihina moa fa dia misy ny Operation Chocolat izay karakarain’ireo fianakaviana mandritry izao tolotanana izao.
Ho an’ireo izay malala-tanana araka izany dia afaka manome izay vitany amin’ny alalan’ny Airtel Money 033 85 368 78 na ny Mvola 034 31 005 63
Dia mankasitraka ho an’ireo rehetra izay nanantanteraka izany adidy izany ireo fianakaviana ary manantena ny fihentananan'ny rehetra.
Uk Buy Albenza Oral Cialis Online Sevilla Order Levothyroxine Canada Online [url=http://levibuying.com]levitra price per pill[/url] Generic Pyridium Best Website With Overnight Delivery
lundi, 16 octobre 2017 05:42
Doxtcycline Pills Without Prescription Elocon With Free Shipping Pastillas Parecidas Al Viagra [url=http://howmuchisvia.com]viagra[/url] Cialis Y Otros Medicamentos Acheter Viagra Discret buy legit accutane
dimanche, 08 octobre 2017 07:37
Dove Comprare Cialis Su Internet Using Outdated Amoxicillin Viagra Similar Precio [url=http://cheapvia50mg.com]online pharmacy[/url] Buying Celebrex In Mexico Generic Prednisone Buy Generic Accutane Online No Prescription